Umatshini womoya waseDalsebo | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Bona kwaye wenze » Utsalo lwezotyelelo » Iindawo zenkcubeko nezembali » Umatshini womoya waseDalsebo
I-Dalsebo windmill ibuyiselwe kakuhle kwaye ngoku iqulethe imyuziyam.
Ilali yaseDalsebo ibekwe kumhlaba onemihlaba kunye neenkqubo zendlela ezinokufana nokuma komhlaba wenkulungwane ye-1700.
Ilali, eyatshintshwa ngo-1771, ihlala kwisiqwenga selali yakudala. Izakhiwo zigcinwe kakuhle kwaye ziqhelekile kwilali yenkulungwane ye-1800.
Endulini embindini welali kukho eyona nkumbulo intle yamaxesha adlulileyo: I-windmill eyakhiwa ngo-1845 ngumfama u-Bengt Olovsson owayehlala kwifama ekuthiwa iphambili embindini welali. Xa ii-watermill zaqala ukuqheleka kwinkulungwane yama-1900, umatshini womoya omdala wamiswa kwaye kwafuneka abole.
UDalsebo 1, 577 93 IHultfred, Sverige
4.6 ngaphandle kwe-5.0
5 uphononongo kuGoogle
I-0495 - 640 12
Fantastisk härlig lagom julmarknad och loppis god fika samt oerhörd vacker omgivning
4/5 8 kwiinyanga ezidlulileyo
5/5 7 kwiinyanga ezidlulileyo
4/5 3 kwiinyanga ezidlulileyo